Indlela yokufaka isicelo kwiiyunivesithi zase-UK-Isikhokelo seNyathelo ngeNyathelo 2022
Eli nqaku lenzelwe ukubonisa abanomdla ngendlela yokufaka isicelo kwiiyunivesithi zase-UK, nokuba ngabafundi bamazwe aphesheya okanye basekhaya. Ukuba ibiliphupha lakho lobomi ekufundeni e-UK, nali inyathelo elibanzi ngesikhokelo sendlela onokuthi ufake ngayo isicelo sokwamkelwa.
I-United Kingdom yenye yezona ndawo zidumileyo zemfundo kwihlabathi kwaye iyaqhayisa ngezinye zeeyunivesithi eziphambili kunye neekholeji emhlabeni ezineenkqubo ezikumgangatho ophezulu. Akumangalisi ukuba kutheni uninzi lwabafundi bamanye amazwe befuna ukuya phaya kwizifundo zabo.
Imozulu kunye nabantu bahlala, inkcubeko ayinzima ukuziqhelanisa nayo kwaye lilizwe elithetha isiNgesi ekungafanelekanga ukuba kube nzima kangako ukulifunda. Ndiyathetha, lolona lwimi luthethwayo emhlabeni kwaye lufundiswa phantse kuzo zonke izikolo eziphakamileyo emhlabeni.
Abantu baseNgesi bashushu kwaye bayabamkela abantu abangabaziyo okanye abafundi bamanye amazwe ngokulula, ke ukuya apho njengomfundi wamazwe aphesheya ngekhe kubangele iingxaki ezininzi.
Ukufaka isicelo kwiiyunivesithi zase-UK kwahlukile kwindlela eya e-United States nase-Canada ii-sytems apho kufuneka wenze izicelo ezizodwa zaseyunivesithi. E-UK, kuya kufuneka ubhale ingxelo yakho yobuqu, faka isicelo kwiiyunivesithi ezintlanu zonke eziqhutywa nge-portal ekwi-intanethi.
Izandi zilula, akunjalo?
Kuya kuba lula kuwe ukuba ufumane ukuxhoma kodwa ukusukela ngoku uqala, kunokuba ngumsebenzi otyhafisayo kodwa ungakhathazeki, le posi yenza ukuba kube lula kangangoko.
1 Iiyunivesithi eziphambili e-UK
2 IiNkqubo zeDigri eziPhezulu e-UK
3 Isikhokelo senyathelo ngenyathelo malunga nendlela yokufaka isicelo kwiiyunivesithi zase-UK
3.1 Khetha iYunivesithi yase-UK kunye neKhosi yoFundo
3.2 Ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno
3.2.1 Izidingo zesicelo sokwamkelwa kwiiyunivesithi zase-UK
3.2.2 Iimfuno zesiNgesi zoBuchule
3.3 Bhalisa kwaye ufake isicelo
3.3.1 Inkqubo yeYunivesithi yase-UK yokuFunda
3.3.2 Inkqubo yesicelo seYunivesithi yase-UK
3.3.3 I-UCAS Conservatoires
3.3.4 Uqeqesho lootitshala
3.4 Bhatala iNtlawulo yeNkonzo yokuNgena kwelinye ilizwe
3.5 Yenza uhlahlo-lwabiwo mali
3.5.1 Izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa kusenziwa uhlahlo-lwabiwo mali lwemfundo zezi:
3.6 Faka isicelo seVisa
3.7 Fika e-UK
3.8 I-FAQ malunga nendlela yokufaka isicelo kwiiyunivesithi zase-UK
3.8.1 Ngaba kulula ukwamkelwa kwiiyunivesithi zase-UK?
3.8.2 Zeziphi iziqinisekiso eziyimfuneko zokwamkelwa eyunivesithi e-UK?
3.8.3 Ixabisa malini ukufaka isicelo eyunivesithi yase-UK?
3.8.4 Zingaphi iiyunivesithi ovumelekileyo ukuba ufake isicelo kwi-UK?
3.9 I ngcebiso
Iiyunivesithi eziphambili e-UK
Kukho iiyunivesithi ezingaphezu kwe-170 kunye namanye amaziko ase-post-secondary e-UK anika uluhlu olubanzi lweeprogram kunye nokubonelela ngeziqinisekiso ezamkelwa ngamazwe ngamazwe. Ukuba awunayo iiyunivesithi engqondweni okanye ucinga ngalo mzuzu, unokufuna ukuqaphela oku kulandelayo:
IYunivesithi yaseSt Andrews
Ezi zezinye zeeyunivesithi eziphezulu e-UK, ungafuna ukuqaphela ukufaka isicelo kuzo, kwaye ukuba akukho nanye kuzo ebonisa umdla wakho wokujonga abanye kwaye ulandele isikhokelo sinyathelo-nge-nyathelo elingezantsi ukuqala isicelo.
IiNkqubo zeDigri eziPhezulu e-UK
Kwakhona, ukuba awunayo ingqeqesho engqondweni ukuba ufuna ukuyifunda, unokujonga ezinye zeenkqubo zeedigri eziphezulu e-UK apha ngezantsi:
Amayeza kunye noGqirha bamazinyo
Ishishini kunye noLawulo
Ukuba akukho nanye kwezi nkqubo onomdla wokufunda, qhubeka nokufumana ehambelana neenjongo zakho zomsebenzi.
Ngoku, masihambe ngohambo oluphambili kwindlela yokufaka isicelo kwiiyunivesithi zase-UK ezichaziweyo kwaye zichazwe inyathelo ngenyathelo.
Isikhokelo senyathelo ngenyathelo malunga nendlela yokufaka isicelo kwiiyunivesithi zase-UK
Esi sisikhokelo sendlela onokufaka ngayo isicelo kwiiyunivesithi zase-UK nokuba ungumfundi wamazwe aphesheya okanye wasekhaya. La manyathelo ngala;
Khetha iYunivesithi yase-UK kunye neKhosi yoFundo
Eli linyathelo lokuqala lokufaka isicelo kwiiyunivesithi zase-UK kwaye akukho nzima, funda ku…
Ufuna ukufunda e-UK, lulwazi olusisiseko kuphela oluya kukhetha eyunivesithi e-UK. Sidwelise ezinye zeeyunivesithi eziphezulu e-UK apha ngasentla, unokufuna ukukhetha apho kwaye ukuba awuthandi nanye kuzo, yenza uphando lwakho kwaye ukhethe abanye.
Xa ukhetha eyunivesithi e-UK qinisekisa ukuba banikezela ngenkqubo oyithandayo kwaye ukuba ungumfundi wamazwe aphesheya uqinisekise ukuba bayaluvuma uhlobo lwakho lwabafundi. Kwakhona, yenza uphando oluthe kratya ukuba eyunivesithi oyikhethileyo iqhubekele kwinjongo yakho yomsebenzi.
Indawo elungileyo onokuthi uqale kuyo Fumanisa i-Uni, iwebhusayithi esemthethweni yokuthelekisa idatha yemfundo ephezulu yase-UK kwaye ikwaphethe ulwazi oluninzi oluya kukunceda uthathe isigqibo malunga nekhosi, indawo, kunye neyunivesithi yase-UK okanye ikholeji ekulungeleyo.
Kukho izinto ezimbini oza kuzigqiba kweli nyathelo lokuqhubela phambili, bakhetha eyunivesithi kunye nenkqubo efanelekileyo iinjongo zakho zomsebenzi.
Ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno
Nali inyathelo lesibini lendlela yokufaka isicelo kwiiyunivesithi zase-UK, unokufuna ukuthoba isantya kancinci ngelixa ufunda eli candelo ukungavisisani okukodwa kungonakalisa yonke inkqubo kuwe.
Iiyunivesithi zibeka iimfuno zokuba abafaki-zicelo kufuneka bahlangane nabo ukuze bamkelwe kumaziko abo okanye ngaphambi kokuba babenako ukwamkelwa kumacandelo abo okufunda kwaye babonwe njengabafundi abagcweleyo.
Izidingo zesicelo sokwamkelwa kwiiyunivesithi zase-UK
Iyunivesithi oyikhethileyo inayo iimfuno ekufuneka uhlangabezane nazo, kwaye andinakuqala ukukhankanya ezi mfuno kuba ziyahluka kwiiyunivesithi kwaye ngamanye amaxesha iinkqubo. Kodwa iimfuno ngokubanzi zezi:
Ipasipoti entsha okanye ikhadi lesazisi likazwelonke
Ubungqina bemali obuya kubonisa ukuba unakho ukwenza imali kwizifundo zethu
Uvavanyo lwesifo sephepha (amazwe athile)
Ubungqina bobuchwephesha bolwimi lwesiNgesi
Ulwazi lomntu siqu kubandakanya iziqinisekiso zakho zemfundo
Ileta ekubhekiswa kuyo
Iikopi zesidanga okanye idiploma
Kwaye mhlawumbi nangaphezulu
Iimfuno zesiNgesi zoBuchule
Iiyunivesithi zase-UK zifuna abafundi abavela kumazwe angathethi siNgesi okanye ulwimi lwabo olungesiNgesi kufuneka bathathe naziphi na iilwimi zesiNgesi kuvavanyo lobuchule apha ngezantsi ukubonisa ubungqina bezakhono zabo zesiNgesi:
I-TOEFL iBT (uvavanyo olusekwe kwi-intanethi)
Olu vavanyo lobuchule besiNgesi onke anamanqaku aphakathi ekufuneka uwapasile kwaye la manqaku ayahluka ngokwamaziko kwaye, kwezinye iimeko, ngeenkqubo nawo kuya kufuneka ujonge iwebhusayithi yeyunivesithi ukuze wazi amanqaku enkqubo yakho.
Ngapha koko, ezinye iiyunivesithi kunye neekholeji zinokufuna ukuba abafaki-zicelo babonelele ngeemvavanyo ezongezelelweyo ezinje nge-UCAT okanye iBMAT yeyeza, okanye i-LNAT yeedigri zomthetho.
Abafakizicelo bamazwe aphesheya kufuneka bathathe uvavanyo lwesifo sephepha kwaye babonise ubungqina bokuba bayasicacisa isifo, nangona oku kungafuneki kwilizwe ngalinye. Jonga ukuba ilizwe lakho lidwelisiwe.
Yenza ingxelo ehlelwe kakuhle njengoko kuyinto enkulu ekufumaneni ukwamkelwa eyunivesithi yase-UK. Ingxelo yakho yobuqu idlala indima ebalulekileyo ekungeniseni ukwamkelwa kwakho yiyo le nto ikwahlula kubo bonke abanye abafundi kwaye inokuba sisitshixo sempumelelo yakho xa ujongene nabantu abakhuphisana nabo abanamabanga afanayo kunye nemvelaphi.
Ingxelo yakho yobuqu kufuneka ibe ubuninzi beempawu ezingama-4,000 kwaye kufuneka ibandakanye iinkcukacha zomdla wakho okanye izinto ozithandayo, into oza kuyinika iyunivesithi, kutheni ukhethe ikhosi, kwaye ubonise ukuzinikela kwakho ekhosini.
Bhalisa kwaye ufake isicelo
Eli linyathelo lesithathu lokuba ungasifaka kanjani isicelo kwiiyunivesithi zase-UK kwaye ngoku, kuya kufuneka ukuba ugqibe ezimbini zokuqala. Kukho iindidi ezimbini kweli nyathelo, isicelo segraduate kunye neeprogram zokugqibela;
Inkqubo yeYunivesithi yase-UK yokuFunda
Ukufaka isicelo kwiiyunivesithi zase-UK njengesidanga sokuqala kulula kakhulu, awunyanzelekanga ukuba ufake isicelo kwezi yunivesithi ngokukodwa njengoko kukho iwebhusayithi enye apho uza kubhalisa khona kwaye ukwazi ukufaka isicelo kuzo zonke iiyunivesithi zase-UK nakwiikholeji endaweni enye.
Abafakizicelo besidanga sokuqala ukuba ngaba bamazwe aphesheya okanye basekhaya kufuneka babhalise kwaye bafake izicelo I-UCAS (iYunivesithi neeNkonzo zeeKholeji zeeKholeji) Gcwalisa ifom yesicelo sakho.
Emva kokugcwalisa ifom yesicelo kwiwebhusayithi, i-UCAS iya kuqhagamshelana nawe ngazo naziphi na izibonelelo ezivela kwiiyunivesithi okanye iikholeji ozikhethileyo.
Ngoku, kukho izibonelelo ezibini zokwamkelwa onokuzifumana kwiiyunivesithi okanye iikholeji ozifakileyo kwaye ezo "zinemiqathango" kwaye zinikezelwa "ngaphandle kwemiqathango".
Ukuba umnikelo wakho awunamibandela, unokuphumla njengoko indawo yakho ekhosini iqinisekisiwe. Oko kuthetha ukuba wamkelwe njengomfundi wase-UK.
Ukuba isibonelelo sakho sinemiqathango oko kuthetha ukuba isithembiso sakho siqinisekiswa kuphela xa ufezekisa iziphumo ezithile kwizifundo zakho zangoku okanye kuvavanyo lwesiNgesi.
I-UCAS okwangoku ihlawulisa i- $ 13 ($ 18) xa ufaka isicelo eyunivesithi kunye nenkqubo okanye i- £ 24 ($ 33) xa ufaka isicelo kwiiyunivesithi okanye iinkqubo ezininzi.
Ungaphendula kwisibonelelo sokwamkelwa kwiwebhusayithi ye-UCAS.
Inkqubo yesicelo seYunivesithi yase-UK
Ezinye iiyunivesithi zase-UK ezibonelela ngezifundo zasemva kwesidanga baneemfuno zabo zokungena kunye neenkqubo zesicelo, jonga iwebhusayithi nganye yezifundo zemiyalelo yesicelo. Ngelixa abanye besebenzisa iNkqubo yase-UK yokuthweswa isidanga kunye neNkonzo yeNkcazo (i-UKPASS).
I-UKPASS yenza inkqubo yesicelo kwiinkqubo zesidanga sokuqala ngokulula, njengoko unokufaka isicelo sokuya kufikelela kwizifundo ezilishumi zesidanga sokuqala ngesicelo esinye esilula. Unokufaka isicelo ngokusebenzisa Iwebhusayithi ye-UKPASS nangaliphi na ixesha njengoko kungekho maxesha amisiweyo.
Nangona kunjalo, indawo yakho yokubamba inokuba nemihla yayo yokuvala kwaye kuba iyahluka kwiiyunivesithi kunye neenkqubo ozikhethileyo kuya kufuneka ujonge nazo ngaphambi kokuba ufake isicelo.
Kukho inkqubo eyahlukileyo yokufaka izicelo zabafundi abafundela isidanga kunye nabaphumelele izidanga abafuna ukufunda umculo, umdaniso, kunye nezifundo zedrama. Eli qonga lesicelo yifayile ye- UCAS Conservatoires iwebhusayithi
Kukho iwebhusayithi eyahlukeneyo yesicelo sabafakizicelo bezidanga zokuqala abafuna ukuthatha iikhosi zoqeqesho lootitshala. Fumana ngakumbi kwaye usebenzise online kwi Iwebhusayithi ye-UCAS yoQeqesho looTitshala.
Xa usamkelwa kwiyunivesithi yase-UK, isiQinisekiso seZifundo zoKwamkelwa kwezifundo (i-CAS) luxwebhu olubonakalayo olunenombolo yesalathiso eyahlukileyo oyithunyelelwe yiyunivesithi eyakwamkelayo. Gcina olu xwebhu lukhuselekile njengoko luya kusetyenziswa ukufaka isicelo se-visa yakho yomfundi.
I-CAS inolwazi oluthe kratya olubalulekileyo njengeenkcukacha zekhosi yakho, umhla wokuqalisa, iindleko zokufunda, kunye nesiqinisekiso sakho esisemthethweni sendawo eyunivesithi.
Bhatala iNtlawulo yeNkonzo yokuNgena kwelinye ilizwe
Esi sisikhokelo sesine sendlela yokwenza isicelo kwiiyunivesithi zase-UK, kulula nje njengoko kuchaziwe apha ngezantsi…
Kuya kufuneka uhlawule umrhumo we-Immigration Health Surcharge ye- $ 150 ($ 210) yokufumana ukhathalelo lwempilo lwasimahla ngalo lonke ixesha lezifundo zakho. Intlawulo ingenziwa kwi-Intanethi kwaye irisithi kufuneka igcinwe kakuhle njengoko iya kufuneka kwisicelo sakho sevisa.
Yenza uhlahlo-lwabiwo mali
Eli linyathelo lesihlanu lokuba ungasifaka kanjani isicelo kwiiyunivesithi zase-UK kwaye uxhalabise ulawulo lwemali kunye nokufumana ezinye iindlela zoncedo ezinokukunceda kwimfundo yakho…
Ukufundela kwilizwe lakho akubizi kwaye ngaphandle koko, kukho iintlobo zenkxaso-mali zikarhulumente onokuthi uzibeke ngokulula izandla zakho. Okulusizi kukuba, akunakuthethwa okufanayo ngabafundi bamanye amazwe njengoko iifizi zokufunda zihlala zingaphezulu kolu didi lwabafundi kwaye azikho ninzi izibonelelo ezikhoyo ezikhoyo.
Ngapha koko, nokuba ungumfundi wamazwe aphesheya okanye wasekhaya kuya kufuneka wenze amalungiselelo okufumana inkxaso-mali kangangoko unokwamkelwa. Unokufumana iimali mboleko, izibonelelo, izifundi, kunye nolunye uncedo lwezezimali ukunceda ukuxhasa ngemali izifundo zakho.
Izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa kusenziwa uhlahlo-lwabiwo mali lwemfundo zezi:
Ukubala oku kuya kukunika umbono wokuba uza kuchitha malini kunyaka wezifundo kwaye kukunceda ulawule izixhobo ngokufanelekileyo. Lo ngumsebenzi (uphando) oya kuyenza ngokwakho.
Abafundi bamanye amazwe baya kufuna i-visa yokuhamba kunye nokufunda e-UK, iinkqubo zesicelo se-visa ziyahluka kumazwe onke. Ndwendwela i-ofisi yozakuzo yelizwe lakho okanye iwebhusayithi ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya.
Eli linyathelo lokugqibela lokufaka isicelo kwiiyunivesithi zase-UK kwaye kulapho i-adventure iqala khona.
Eli nyathelo liyazichaza. Emva kokuba unikwe i-visa ngurhulumente wase-UK ngoku ungaya e-UK ukuqala izifundo zakho. Gcina onke amaxwebhu akho ekhuselekile njengoko anokufunwa ngabokufika xa ufika emhlabeni.
I-FAQ malunga nendlela yokufaka isicelo kwiiyunivesithi zase-UK
Ukukunceda uqhubeke, sineempendulo zeminye imibuzo ebuzwa rhoqo xa kufikwa kufundo lwase-UK. Ezi FAQ zezi:
Ngaba kulula ukwamkelwa kwiiyunivesithi zase-UK?
I-UK ineeyunivesithi eziphambili ezinje ngeCambridge neOxford ekunzima kakhulu ukungena kuzo, enyanisweni, inqanaba lokwamkelwa lingaphezulu kancinci kwe-20%. Ke, nokuba iyunivesithi yase-UK kunzima ukungena kuyo okanye hayi ayixhomekekanga kwiyunivesithi oyifaka isicelo kunye namandla akho ezifundo.
Zeziphi iziqinisekiso eziyimfuneko zokwamkelwa eyunivesithi e-UK?
Izidingo zokungena kwiiyunivesithi zase-UK ziyahluka kakhulu njengoko nganye ibeka iimfuno zayo zemfundo ngokwekhosi yakho, inqanaba lokufunda kunye nelizwe elivela kulo.
Nangona kunjalo, imfuno yesiqinisekiso semfundo kwabo bafaka izicelo zesidanga sokuqala kukuba abafundi kufuneka bagqibe amabanga aphakamileyo okanye amabanga aphakamileyo kwaye bapase amanqanaba e-A kwaye bafumana amabanga athile.
Ngelixa labafakizicelo bezidanga zokuqala, kufuneka ukuba ugqibe isidanga se-bachelor kwaye afumane amabanga athile okanye i-GPA.
Ixabisa malini ukufaka isicelo eyunivesithi yase-UK?
Xa ufaka isicelo sekhosi, umrhumo uyi- $ 13 ($ 18) kodwa xa ufaka isicelo seekhosi ezininzi, umrhumo uyi- $ 24 ($ 33). Iinkcukacha ezithe kratya malunga neendleko zesicelo kwiiyunivesithi zase-UK zinikwe apha ngasentla.
Zingaphi iiyunivesithi ovumelekileyo ukuba ufake isicelo kwi-UK?
Elona nani liphezulu leeyunivesithi onokuthi ufake isicelo kuzo zintlanu (5) zekhosi efanayo okanye iikhosi ezintlanu ezahlukeneyo kwiyunivesithi enye-khetha eyona ikulungeleyo.
Izifundo zasimahla ze-Intanethi ze-22 ezineZatifikethi e-UK
Iikhosi ezili-12 zasimahla kwiNjineli yezifundo zobunjineli ezineZatifikethi
Iikhosi ze-15 zeFree Online zoKwenza iFilimu zaBafundi
Indlela yokufaka isicelo kwiiyunivesithi zase-UK
Post Previous:I-10 zeYunivesithi ezingabizi kakhulu eCanada kwiiNkqubo zeBakala lesiGqeba kunye nezoPhuculo